ईबादत (उपासना) भनेको के हो? – Islam Guide
ईबादत (उपासना) भनेको के हो?
नोभेम्बर 30, 2017 Comments
ईबादत- मानिसका सम्पूर्ण भनाई, गराई र क्रियाकलाप, जसलाई अल्लाहले मन पराउनु हुन्छ र गर्न आदेश दिनु भएको छ ती सम्पूर्ण सत्कर्महरुलाई ईबादत भनिन्छ। चाहे त्यो वाह्य सत्कर्म होस् जस्तै… सलाह पढ्नु, दान दिनु, हज्ज गर्नु वा आन्तरिक जस्तै… अल्लाह र रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लाई माया गर्नु, अल्लाहसँग डराउनु, उहाँमाथि नै भरोसा गर्नु र उहाँसित मद्दत माग्नु इत्यादि।
ईबादतले जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेटेको छ-
उपासना भनेको सलाह पढ्नु र ब्रत बस्नु मात्र होइन, यसले जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरुलाई समेटेको छ। स्वच्छ मनले गरिएका आस्थावानहरुका सम्पूर्ण उपयोगी कार्य, सही निधो र क्रियाकलापहरु उपासना मानिन्छ र त्यस वापत पुण्य प्राप्त हुन्छ। शक्ति प्राप्त गर्नको नीयतले खानपिन गर्नु उपासना हो।अनैतिक सम्बन्धबाट बच्नको लागि विवाह गर्नु उपासना हो। त्यस्तै वैध तरिकाले आय आर्जन गर्नको लागि व्यवसाय गर्नु वा जागिर खानु उपासना हो। त्यसैगरी ज्ञान सिक्नु, लेख लेख्नु, ज्ञान विज्ञानको दुनियाँमा नयाँ-नयाँ कुराहरुको आविष्कार गर्नु, यी सबै उपासना हो। महिलाको लागि पुरुष, बालबच्चा र घरबारको हेरचाह गर्नु उपासना हो। त्यसैले जीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप तथा लाभदायक कार्यहरु शुद्ध र स्वच्छ नीयत सामेल छ भने मुस्लिमको दैनिकी र जीवन नै उपासना हो।
ईबादत नै सृष्टिको उद्देश्य हो-
अल्लाहले भन्नु भएको छ… “मैले जिन्न र मानवलाई केवल आफ्नो ईबादत (उपासना) गर्नको लागि सृष्टि गरेको हुँ। म ’emबाट न त जीविका चाहन्छु न भोजन नै। अवश्य नै अल्लाह अन्नदाता र अति शक्तिशाली हुन्।” (श्रोत- सूरह अज्जारियात : ५१/५६-५८)
अल्लाहले जिन्न र मानिसको सृष्टिको रहस्य उनीहरुले अल्लाहको उपासना गरुन् भनेर अवगत गराउनु भएको छ। स्मरण रहोस् ! अल्लाहलाई उनीहरुको उपासनाको कुनै आवश्यकता छैन तर उनीहरु उहाँको कृपा बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दैनन्।
जब मानिस आफ्नो उद्देश्यलाई बेवास्ता गर्छ र सांसारिक मौज-मस्तीमा डुब्छ, त्यस बखत मानिसमा र जनावरमा केही फरक हुँदैन। ’cause जनावरहरु पनि खान्छन् र मौज-मस्ती गर्छन्। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “जुन व्यक्तिहरुले अवज्ञा गरे ’em क्षणिक मस्तीमा रमाईरहेका छन् र जनावर जस्तै खाइरहेका छन्। उनीहरुको बासस्थान नरक हो।” (श्रोत- सूरह मुहम्मद : ४७/१२) त्यसैले उनीहरु आफ्नो क्रियाकलाप र लक्ष्य प्राप्तिमा जनावर सरह हुन्। तर मानिससँग बुद्धि हुन्छ, जनावरसँग हुँदैन, त्यसैले उनीहरुले मृत्यु पश्चात त्यसको प्रतिफल अवश्य नै पाउनेछन् ।
ईबादतका दुईवटा महत्वपूर्ण स्तम्भहरु छन्…
पहिलो- हीनता र भय।
दोस्रो- अल्लाहको लागि अपार प्रेम।
अल्लाहले आफ्ना भक्तहरुमाथि जुन उपासनालाई अनिवार्य गर्नु भएको छ त्यसमा उहाँको लागि आदर, अपार प्रेम, हीनता र भयको साथमा आशा मिसिएको हुनुपर्छ।
त्यसैले जुन मायाको साथमा हीनता र भय हुँदैन, जस्तै… खाना र धन-सम्पत्तिको माया, त्यो उपासना होइन।यस्तै बिना मायाको भय, जस्तै… कुनै जङ्गली जनावर र सामन्ती हाकिमको भय, त्यो उपासना होइन। जुन कार्यमा भय र माया दुवैको मिश्रित हुन्छ त्यो उपासना हुन्छ र उपासना मात्र अल्लाहको लागि नै हुनुपर्छ।
कुनै पनि ईबादत (उपासना) स्वीकृत हुनको लागि निम्नलिखित दुई शर्तहरु हुन जरुरी छ-
इत्तिबा- रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सुन्नत अनुकूल उपासना गर्नु।
इख्लास- कसैलाई साझेदार नगरिकन अल्लाहको लागि मात्र उपासना गर्नु।
अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हो, जसले आफूलाई अल्लाहको लागि समर्पित गर्यो र ऊ परोपकारी छ भने उसको लागि प्रभु कहाँ प्रतिफल हुनेछ। उसको लागि न कुनै भय हुनेछ न कुनै चिन्ता नै।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह : २/११२)
‘अल्लाहको लागि समर्पित’ को अर्थ : एकेश्वरवादलाई पूर्णता दिनु र मात्र अल्लाहको लागि ईबादत गर्नु।
‘परोपकारी’ को अर्थ : रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को पूर्ण अनुसरण र उहाँको सुन्नत अनुकूल उपासना गर्नु हो।
रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सुन्नत अनुकूल हुनु भनेको उपासनाहरुमा मात्र हुन्, जस्तै… सलाह पढ्नु, ब्रत बस्नु, अल्लाहको जिक्र (प्रशंसा) गर्नु। तर जुन कुराहरु उपासना अन्तर्गत पर्दैनन् जस्तै… अल्लाहको उपासना गर्नमा बल पुग्नको लागि व्यायाम गर्नु, घरपरिवारको खर्च जुटाउन व्यवसाय गर्नु इत्यादिमा उहाँको अनुसरण चाहिंदैन। इस्लामि विधि-विधानको विपरित नहुनु र अवैध तरिकाले नगर्नु नै पर्याप्त छ।